Kitra – «Amboaran’ny Caf» : tsy resy, saingy tsy tafakatra ny Cnaps Sport | NewsMada
Kitra – «Amboaran’ny Caf» : tsy resy, saingy tsy tafakatra ny Cnaps Sport
Nisaraka ady sahala samy tsy nisy nitoko ny Cnaps Sport sy ny La Recreativo do Libolo avy any Angola, teo amin’ny lalao miverina amin’ny fiadiana ny “Amboaran’ny kaonfederasiona”, taranja baolina kitra. Fihaonana, natao tany amin’ny kianja Calulo, ny asabotsy lasa teo.
Na tsy resy aza ny Cnaps Sport, tsy ampy hiakaran’ny ekipa malagasy ny isa azony. Nanome tombony ho an’ny La Recreativo ny baolina maty taty Madagasikara (1 – 1), nandritra ny fihaonana mandroso ka nahazoan’izy ireo manohy ny fifaninanana dia ny fifanintsanana ao anaty vondrona.
Niady ary nanao izay ho afany ny mpilalaon’ny Cnaps, nandritra ny 90 mn, saingy tsy nety nahatafiditra baolina ry Njiva sy Niasexe. Anisan’ny nanavotra ny ekipa angoley ny mpiandry tsatoby an-dry zareo. Voasakany avokoa mantsy ny dakan-dry Francis sy ry Njiva.
Na izany aza, nanindry ary tena nanao totoafo ihany koa ny fanafihan-dry zareo La Recreativo ary imbetsaka no tafiditra tao anaty faritra tsy azo ivalozana ireo lohalaharany, saingy nahay ry Ando sy ry Toby teo amin’ny fanakanana azy ireo.
Tapitra hatreo izany ny fifaninanana afrikanina ho an’ny Cnaps Sport, ho an’ity taom-pilalaovana ity. Dingana manaraka ho azy ireo ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCCOI). Hatreto anefa, tsy mbola fantatra ny daty sy ny fotoana hanatontosana izany. Raha ny heno, tokony hovitaina amin’ity taona 2017 ity izany.